Quality - Micro-Semiconductor.com
Manadihady tsara ny mari-pahaizana momba ny trosan'ny mpamatsy izahay, hifehezana ny kalitao hatramin'ny voalohany. Manana ny ekipanay QC manokana izahay, afaka manara-maso sy mifehy ny kalitao mandritra ny dingana rehetra ao anatin'izany ny fahatongavany, ny fitehirizana ary ny fandefasana. Ny ampahany rehetra alohan'ny fandefasana dia holaniana amin'ny Departemantan'ny QC, manolotra fiantohana 1 taona ho an'ny faritra rehetra natolotray.
Ny fitsapana anay dia misy:
Fitsapana azo hamahana
Decapsulation ho an'ny fanamarinana ny maty
Fampiasana mikraoskaopy stereoscopic, ny fisehoan'ny singa ho an'ny fandinihana manodidina ny 360 °. Ny fifantohana amin'ny satan'ny fandinihana dia misy ny fonosana vokatra; karazana chip, daty, batch; fanontana sy ny fonosana fanjakana; fametahana pin, coplanar miaraka amin'ny fametahana ny raharaha sns.
Ny fanaraha-maso ny maso dia afaka mahatakatra haingana ny takiana mba hihaona amin'ireo takiana ivelany an'ny mpanamboatra marika tany am-boalohany, ny fenitry ny anti-static sy ny hamandoana, ary na ampiasaina na nohavaozina.
Ny fiasa sy ny masontsivana rehetra nosedraina, nantsoina hoe fitsapana fiasa feno, araky ny fanombohana tany am-boalohany, naoty apetraka, na tranokala fampiharana ho an'ny mpanjifa, ny fiasan'ny fitaovana rehetra nosedraina, ao anatin'izany ny masontsivana DC an'ny fitsapana, saingy tsy misy fampiasa paréquence AC ny famakafakana sy ny fanamarinana dia ampahany amin'ny fisedrana tsy be dia be ny fetran'ny masontsivana.
Fanaraha-maso taratra X, ny fivezivezena an'ireo singa ao anatin'ny fandinihana manodidina ny 360 °, hamaritana ny firafitry ny singa ao anatin'ny fizahana sy ny fifandraisana misy ny fonosana, azonao atao ny mahita santionany marobe anaovana andrana dia mitovy, na mifangaro (Mixed-Up) mipoitra ny olana; Ho fanampin'izany dia samy manana ny masontsivana (Datasheet) izy samy izy fa tsy hahatakatra ny maha-marina ny santionany andrana. Ny fifandraisan'ny fonosana fanandramana, hianaranao ny fifandraisana chip sy ny fonosana eo anelanelan'ny tsimok'aretina dia mahazatra, mba hanilihana ny lakile sy ny open-wire tariby fohy.
Tsy fomba fitadiavana hosoka io satria mandeha ho azy ny okididia; na izany aza, olana lehibe amin'ny fampiasa io ary mihanaka indrindra amin'ny toetrandro mafana sy mando toa an'i Azia atsimo atsinanana sy ireo fanjakana atsimo any Amerika Avaratra. Ny fenitra iraisana J-STD-002 dia mamaritra ny fomba fitsapana ary manaiky / mandà ny mason-tsivana ho an'ny thru-hole, ny mount mount, ary ny fitaovana BGA. Ho an'ireo fitaovana tsy misy BGA ambonimbony dia ampiasaina ny dip-and-look ary ny "test de la plate seramika" ho an'ny fitaovana BGA dia nampidirina tato anaty serivisinay. Fitaovana alefa anaty fonosana tsy mendrika, fonosana azo ekena nefa efa herintaona mahery, na fampisehoana fahalotoana amin'ny tsimatra dia asaina hizaha toetra mora vahana.
Fitsapana manimba izay manala ireo akora simika amin'ilay singa hanambarana ny maty. Ny maty dia averina dinihina ho an'ny marika sy ny maritrano mba hamaritana ny fahamendrehana sy ny maha-marina ny fitaovana. Ny herin'ny fanamafisana hatramin'ny 1.000x dia ilaina mba hamantarana ireo mariky ny maty sy ny anomaly ambonin'ny tany.